स्क्रू सेट गर्नुहोस्: यो के हो र अनुप्रयोगहरू | नि: शुल्क हार्डवेयर
त्यहाँ धेरै छन् प्रकार स्क्रू बजारमा, केहि धेरै लोकप्रिय र केहि अधिक विशिष्ट विशेष अनुप्रयोगहरूको लागि विशेष। ती प्रकार मध्ये एक तथाकथित सेट स्क्रू हो, जसको लागि हामी तपाईंलाई यो विविधताका बारे जान्न आवश्यक सबैकुरा वर्णन गर्न यस लेखलाई समर्पण गर्नेछौं र यसले कसरी तपाईंको मद्दत गर्न सक्दछ तपाईंको DIY प्रोजेक्टहरू.
El पेंच सेट गर्नुहोस् यो पक्कै वास्तविक प्रकारको स्क्रू हो जुन केही व्यावहारिक अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ जुन तपाईंले अवश्य पनि अवश्य देख्नुभएको छ। उदाहरण को लागी, अब दिमागमा आएको पहिलो चीज भनेको बीकन वा स्ट्रिटलाइटहरू हुन्, जहाँ तिनीहरू सामान्यतया यी बत्तीहरूको केही अंशहरू राख्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जब उनीहरू विस्थापन गरिन्छ ...
बोल्ट र स्क्रु बीच भिन्नता धेरैको लागि सजिलो कुरा होइन। दुई बीचको भिन्नता भ्रामक हुन सक्छ, तर मुख्य भिन्नता थ्रेड र आकारमा छ। बोल्ट प्रायः ठूला हुन्छन् र पोइन्डड अन्त बिना नै हुन्छन्। पेच साना र पोइन्ट छन्।
1 सेट स्क्रू भनेको के हो?
2 शिकंजाका प्रकारहरू
2.1 टाउको अनुसार
2.2 पेंच सामग्री अनुसार
2.3 समाप्त अनुसार
2.4 समारोह अनुसार
सेट स्क्रू भनेको के हो?
Un पेंच सेट गर्नुहोस् यो मूल रूपमा धातु सिलिन्डर वा थ्रेडेड रड हो जसमा धागा यसको लम्बाईमा कोरिएको छ। त्यो हो, यसमा अन्य स्क्रूको जस्तै टाउकोको अभाव छ। यसको छेउछाउ बीच केवल भिन्नता यो हो कि ती मध्ये एउटालाई रुट भनियो र यसलाई थ्रेडेड प्वालमा पेचिन्छ र अर्को छेउमा स्क्रु ड्राईभर फिट गर्नको लागि अनुहार कुँदिएको हुन्छ (यो एलेन कुञ्जी पनि हुन सक्दछ) स्क्रू वा स्क्रु गर्न को लागी ।
यस प्रकारको पेचको उपयोगिता सामान्यतया हुन्छ भाग निर्धारण र स्थिति हटाउन योग्य वस्तुहरूमा निश्चित स्थिर तत्वहरूको। उदाहरण को लागी, ट्यूबको सेक्सन को कल्पना गर्नुहोस् जुन अर्को ट्यूबमा जान्छ। बाह्य ट्यूबमा थ्रेडेड प्वालहरू छन् जसमा यी स्क्रूहरू सम्मिलित गर्न सकिन्छ भित्री ट्यूब वरिपरि दबाब दिन, यसैले भित्री ट्यूबलाई समात्दै।
सेट स्क्रू र बीच भिन्नता एक परम्परागत यो मुख्यतया यसको शरीरविज्ञान र यसको अधीनमा रहेको बलहरूमा रहन्छ। परम्परागत एकमा, निश्चित रूपमा तपाईले देख्नु भएको छ कि तपाई क्रमशः टेप गर्दै हुनुहुन्छ, तर यसको टाउको (विशेष गरी यदि यो काँसा, एल्युमिनियम वा अन्य नरम मिश्र धातुले बनेको छ, र विशेष गरी जब केही ड्रिलहरू नियन्त्रण बिना प्रयोग गरिएको छ) बलको कारण बिग्रन सक्छ। । यसले यसलाई फिर्ता लिन वा यसलाई निचोल्न असम्भव बनाउँदछ ...
सेट स्क्रूमा, ढोका प्रयोग गरिएको अंश जुन टाउकोबिना पूर्ण रूपमा स्क्रूमा एकीकृत हुन्छ। तसर्थ, यो मात्र हो केवल कर्षणको अधीनमा। थप रूपमा, तिनीहरू सामान्यतया अधिक प्रतिरोधको लागि स्टीलको बनेका हुन्छन्।
त्यहाँ धेरै छन् शिकंजा को प्रकारहरु सेट स्क्रू बाहिर, र विभिन्न कारकहरू अनुसार वर्गीकृत गर्न सकिन्छ ...
अनुसार टाउको को आकार पेंच को त्यहाँ छन्:
हेक्सागनल: यो धेरै सामान्य छ र प्राय: चाप्ने भाँडो जोड्न वा माउन्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू पनि सामान्यत: एक नट छ। र ती सबैलाई सकेट वा रेन्च प्रयोग गरेर कडा गर्न सकिदैन, केहीले स्क्रु ड्राईभर ग्रिप्स पनि समावेश गर्दछ। उदाहरण को लागी, हेक्स फ्ल्यांज स्क्रूको सामान्यतया एक तारा टाउको हुन्छ, र यसको ठूलो फाइदा भनेको यो हो कि यसलाई धुनेवाला चाहिदैन।
टाँसिएको टाउको: ती सब भन्दा साधारण हो, ती जसले एक स्क्रिड्रिभरको प्रयोगको लागि अनुमति दिन्छ। त्यहाँ तिनीहरू एक फ्लैट, क्रूसिफार्म ग्रूभ, आदि सहित छन्। तिनीहरू उपयुक्त छन् जब ठूलो कसलाई आवश्यक पर्दैन, जस्तै काठ तत्वहरू सहित। जे भए पनि टाउको बाहिर रहन्छ, यदि काउन्टरसिink्क बनाइयो भने यसलाई लुकाउन सकिन्छ।
वर्ग हेड: ती पहिलेका भन्दा बारम्बार छैनन्। ती केसहरूमा प्रयोग गरिन्छ जहाँ हेक्सागोनल जस्ता ठूलो कस आवश्यक छ। उदाहरण को लागी, काटि tools उपकरण फिक्सिंग को लागी वा केहि मेसिनको भागहरु लाई सार्दै।
बेलनाकार वा गोलो टाउको: तिनीहरूसँग एलेन कुञ्जी वा अन्य प्रकार सम्मिलित गर्न प्राय: हेक्सागन भित्र हुन्छ। ती जोडीहरूमा प्रयोग गरिन्छ कि कसको साथ उच्च कसको आवश्यकता छ। म टाउको को प्रकारहरु वर्णन गर्न यो अवसर लिन्छु:
प्लाना: यस प्रकारको फ्ल्याट स्क्रू ड्राईभरको लागि उनीहरूको टाउकोमा केवल एउटा स्लट छ।
तारा वा क्रस: तिनीहरू तथाकथित फिलिप्स प्रकार हुन्।
पोजिद्रिभ (Pz): पहिलेको भन्दा धेरै समान, तर यसको गहिरो क्रस र अर्को सतही चिह्न छ जुन एक तारांकितको देखावा दिन्छ।
Torx- यी साधारण छैनन्, तर केहि काठकाउने अनुप्रयोगहरू, आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसको टाउकोमा दुर्लभ तारा आकारको अवकाश छ।
अरूलाई: त्यहाँ अरू जस्तै काँच वा कप, रबर्टसन, ट्राइ-वि W, टोरक-सेटम, स्प्यानर, इत्यादि छन्।
तितली: यसको नामले देखाउँदछ कि यो एक किसिमको नट हो जसको "पखेटा" आकारमा एक पुतलीको आकारमा आफ्नै हातले कस गर्न सक्षम हुन सक्छ। धेरै जसो टोक़को आवश्यक पर्दैन र त्यो बारम्बार माउन्ट र हटाउन आवश्यक पर्दछ।
पेंच सामग्री अनुसार
अर्कोतर्फ, यदि सामग्री पेंच हामीसँग छ:
एल्युमिनियमको: प्रयास गर्न धेरै प्रतिरोधी छैन, तर जलवायु अवस्था र प्रकाश प्रतिरोधी। प्लास्टिक र काठ को लागी आदर्श।
Duraumin: तिनीहरू क्रोमियम जस्ता अन्य धातुहरूको साथ मिलेर एल्युमिनियमको बनेका छन्। तिनीहरूले यसको स्थायित्व वृद्धि गर्दछ।
इस्पात: यो सामान्यतया स्टेनलेस स्टील हो, र ती धेरै बलियो छन्।
प्लास्टिक- यी दुर्लभ छन्, तर अत्यधिक आर्द्रता अवस्था राम्रोसँग सामना गर्न उपलब्ध छन्, जस्तै प्लम्बर अनुप्रयोगहरू।
ब्रास: तिनीहरूको सुनौलो रंग छ र काठको साथ प्रयोगको लागि धेरै सामान्य छ। तिनीहरू शक्तिशाली छन्, तर इस्पात भन्दा बलियो छैन।
यी पेच पनि हुन सक्छ बिभिन्न फिनिश:
क्याडमियम: उनीहरूको चाँदीको उपस्थिति छ, तिनीहरूसँग विभिन्न परिस्थितिहरूको राम्रो प्रतिरोध छ र जब यसलाई अक्सीकरण गरिन्छ यसले क्षयका उप-उत्पादनहरू उत्पन्न गर्दैन।
गल्वानीजाडो: जस्तको स्नान प्रयोग गरिन्छ र यसको चाँदीको रूप पनि हुन्छ, जबकि विशिष्ट जस्ता दागहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो क्षय स्थितिमा राम्रोसँग प्रतिरोध गर्दछ।
ट्रपिकल: तिनीहरूसँग एक इंद्रधनुष्य पहेंलो रंग छ। यो एक जस्ती र क्रोम समाप्त संग हासिल गरीन्छ। यसले थप क्षरण प्रतिरोध बढाउँदछ।
निकल चढ़ाइएको: निकल समाप्त गर्न को लागी एक चमकदार सुन फिनिश धन्यवाद छ। यो सामान्यतया सजावटी फिनिशमा प्रयोग गरिन्छ।
ब्रास चढ़ाइएको- ब्रास प्रयोग गरीएको छ र केहि सजावटी समाप्त र जंग प्रतिरोध को लागी एक चमकदार धातुको उपस्थिति छ।
फास्फेटिज्ड: तिनीहरू डुबाएर फस्फोरिक एसिडमा नुहाउँछन् र यसले उनीहरूलाई खैरो कालो उपस्थिति दिन्छ।
उदास: ती गाढा कालो रंगको साथ अर्ध चमकदार छन्। तिनीहरू स्टीलको अक्सिडेसनबाट गुज्रन्छन् जसले त्यो कालो तह उत्पादन गर्दछ जसले तिनीहरूलाई क्षरण प्रतिरोधी बनाउँदछ।
चित्रितकेहि अधिक सजावटी हुन चित्रित छन्, उदाहरणका लागि काला स्क्रू केही काठको फर्निचरले प्रयोग गर्दछ।
अनुसार समारोह पेच को पनि cataloged गर्न सकिन्छ:
सेल्फ-ट्यापिंग र सेल्फ ड्रिलिंग- पाना धातु र हार्डवुडको लागि प्रयोग। तिनीहरू धारिलो र सामग्री मार्फत आफ्नै बाटो काट्न सक्षम छन्।
काठ धागा: विगतका भन्दा फरक, तिनीहरूसँग आफ्नो सम्पूर्ण लम्बाईमा धागा कोरिएको छैन, तर पछाडिको भाग अवर्क गरिएको छ। ती काठका लागि विशिष्ट ल्याग स्क्रू हुन् जहाँ धागा केवल स्क्रूको //3 हुन्छ। तिनीहरूसँग पनि छिटो टिप छ र आफ्नै तरिकाले काट्न सक्छ।
नट संग: उनीहरूको कुनै मतलब छैन, र ठूलो दबाबको साथ भागहरूमा सामेल हुन एक नट प्रयोग गर्नुहोस्। यो माउन्टिंग वाशरको साथ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसैले नट र टाउकोको बैठकलाई सुदृढ पार्दछ।
स्क्रू वा स्टडहरू सेट गर्नुहोस्: (माथि वर्णन गरिएको एक)
इन्भोलिएबल: यो सुरक्षा अनुप्रयोगहरूको लागि स्क्रूको एक प्रकार हो जुन स्क्रुभ गरिएको छ र हटाउन असम्भव छ। तपाईं मात्र भाग भाँच्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू सार्वजनिक गरीएको भागहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरूलाई हेराफेरी हुनबाट रोक्दछ।
अरूलाई: तिनीहरू उच्च परिशुद्धता अनुप्रयोगहरू, उच्च प्रतिरोधको लागि (टाउकोमा आरम्भिक टीआरको साथ चिह्नित), इत्यादि को लागि क्यालिब्रेट गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » 3D मुद्रण » स्क्रू सेट गर्नुहोस्: यो के हो र अनुप्रयोगहरू